भिडियो – agrimnepal
काठमाडौं, २७ कार्तिक । चर्चित लोकदोहोरी बाल गायिका कमला घिमिरेको पहिलो गीत ‘चिया छानेको’ नामक गीत आज सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा एक समारोहकाबीच उक्त गीत सार्वजनिक गरिएको हो।क्लबका सभापति ऋषि धमला, कलाकार तथा सञ्चारकर्मी कृष्ण कँडेल, गीतका लय सर्जक खेम सेन्चुरी, शब्द रचनाकार रमेश बिजी, प्रस्तुतकर्ता शम्भु कुँवर, निर्देशक […]
काठमाडौं। भारतलाई दोष दिनुअघि आफनै देशको सरकार किन मौन बसेको छ ? यो बढी गम्भीर हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निस्किएको बेनामे विज्ञप्तिबाटै थाहा हुन्छ, सरकारमा लेण्डुपै लेण्डुप छन् । राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री त लम्पसारवादी रहेछन् ।’ नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफनो नक्शामा राखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई अचम्मित भएका छन् । त्यो भन्दा […]
ईटहरी/ २ वर्षअघि सिनेमा घरमा प्रदर्शन आएको फिल्म “सत्रु गते”लाई अब भने युट्युबमा हेर्न पाईने भएको छ । प्रदर्शन पश्चात् सिनेदर्शकको मन जितेको फिल्मले प्रदर्शन अगाबैदेखी चर्चामा थियो । यो संगै दिपक राज गिरीका अनुसार यसपछि “छक्का पन्जा ३” पनि छिट्टै सार्बजनिक गरिने छ । तर सो फिल्म कुन मितिमा युट्युबमा आउने भन्ने कुरा भने […]
बिराटनगर। बिराटनगरको घिनाघाटकी बबिता सरदार १६ बर्ष अघिदेखि एक आँखाको भरमा छिन् । पाँच बर्षकै उमेरमा देब्रे आँखा गु’माएकी उनले दाहिने आँखाले हेर्ने गर्छिन् । २१ बर्षीया सरदारलाई दुई आँखाले हेर्न नपाउँदाको समस्या जति छ, त्यत्तिनै एउटा आँखा नभएर अनुहारको स्वरुप बिग्रदाको पीडा थियो । तर, अहिले उनको यो पीडा हटेको छ । बिराटनगर स्थित […]
काठमाडौं : लोकगायक प्रेमराजा महतको नयाँ नेपाली सन्देश गान ‘आयो नेपाली…’ सार्वजनिक भएको छ। गायक महतले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत् मंगलबार गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। गीतका शब्द, संगीत र स्वर स्वयम् महतको रहेको छ। गीतको एरेन्ज बि.बि अनुरागीले गरेका हुन् भने भिडियो सम्पादन मिनराज अर्यालले गरेका हुन्। गीत नेपाली सेनाप्रति समर्पित भएको गायक महतको भनाइ छ।
सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा हिजो आइतबार दिउँसो भएको यात्रुवाहक बस दु*र्घटनामा परी १७ जनाको मृ*त्यु तथा ५१ जना घा*इते भएको खबरले शैलुङ गाउँपालिका शोकमा डुबेको छ। उक्त यात्रुवाहक बस दु*र्घटनामा परी घा*इते भएकाको काभ्रेस्थित धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र बनेपास्थित शिरमेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका मागा देउरालीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा २ ख ७२४५ […]
महिला हिंसा पछिल्लो समय झन् बढ्न थालेको छ।अझ अपाङ्ग महिलामाथि पुरुषको दृष्टिकोण निकै खराब छ हो त्यस्तै पिडामा आफ्नो जीवन चलाउदै आएकी सुभद्राको कहानीले यो समय सबैलाई रूहाउने गरेको छ। श्रीमानले अलपत्र पारेर छाडेपछि घर न घाटकि भएकी सुभद्राको पिडा देखेर सबै चिन्तित छन।केहि बर्ष अगाडी उनको श्रीमानले छाडेपछि उनको बिचल्ली भएको थियो।दुवै खुट्टा गुमाएकी […]
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आज डडेल्धुरा पुगेका छन। सरकारले आफुसँग गरेका माग पूरा नगरेको भन्दै १७ औँ अनशन बस्न डा. केसी डडेल्धुरा पुगेका हुन। डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि यसअघि १६ पटक अनशन बसिसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा देशका सबै क्षेत्रका नागरिकको समान पहँच हुनुपर्ने भन्दै उनले […]
काठमाडौ। जीवन कुन बेला कस्तो परिस्थितीमा गुज्रन्छ थाहा नै हुन्न। अहिले हासिरहेको जीवन कुन बेला ओ*ईलिन्छ पत्तै हुन्न । बुद्ध तामाङ्गलाई बिराटनगरको नोबेल अस्पतालको ला*परबाहीले अ*परेशन पछि उनको शरीर सु*केर ४५ केजी बाट १४ केजीमा झ*रेको थियो । बुद्धलाई अहिले उनका फुपूले टिचिङ्ग अस्पतालमा उपचार गर्दै आइरहेकी थिईन् । घरायसी अव*स्था समेत नजिक रहेको बुद्धको […]
काठमाडौ। अहिलेको प्रतिपक्षि दल अर्थात नेपालि कांग्रेशका सभापति शेरबहादुर देउवाको आवाज त्यति प्रष्ट हुने गर्दैन। उनले बोलेको नबुझिएर बेला बेलामा उनि आफुनै समस्यामा आउने गर्छन। केहि दिन पहिले राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले शेर बहादुरले बोलेको कुरा केहि नबुझिएको भन्दै मंच बाट नै खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। देशको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले […]